သဘောင်္သားလည်း အသည်းနဲ့ ပါ… (၁) ~ MSU Portal
8/20/2012 09:16:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
ဟိုတစ်နေ့က ပျင်းပျင်းရှိတာ နဲ့ မြန်မာကားတစ်ကားငှားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်….. ကျွန်တော်က ရုပ်ရှင်အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်……. ရုပ်ရှင်များကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ပါပဲ….. ဒါပေမယ့်မြန်မာကားတွေကိုတော့ အတော်ကြည့်ခဲပါတယ်…. ဘာလို့ လဲဆိုတာတော့ ပြောပြရင်တစ်နေကုန်သွားမှာမို့ မပြောတော့ပါဘူး …. ထားပါလေ… ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့….
ဘယ်ကားဘယ်နာမည်လည်းလည်းမမှတ်မိတော့ပါဘူးလေ…. ဒါပေမယ့်အဲဒီထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး တစ်ခုကိုတော့ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်….. ဒီလိုပဲ အဲဒီလိုဇာတ်ဝင်ခန
်းတွေ သတိထားမိတာကြာပါပြီ…. အတော်ကလေးကြာပါပြီ… မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ….. ဇာတ်ဝင်ခန်းက …. မင်းသမီးကို မိဘက သဘောတူတဲ့လူနဲ့ လာမြန်းတဲ့ အခန်းပါ…. သဘောတူတဲ့ လူက သဘောင်္သား …. အဲဒီနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တာက … လူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ…. ထမင်းစားပွဲမှာ မင်းသမီးကို ငမ်းရင်း.. ငါးပိရည်နဲ့ … ချဉ်ရည်ဟင်းမှားသောက်တဲ့ အကွက်… ဟာသ… တဲ့…. ကဲ ဘယ်မလဲဟာသ…. ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ မရပါ….
ကိုယ်က သဘောင်္သားမို့ … သဘောင်္သားများ ဘက်က နာတယ်ပဲဆိုကြပါ….. ဒါပေမယ့် … သဘောင်္သားတွေ ထဲမှာ အဲဒီလို ပေါချာချာ လုပ်တဲ့လူမျိုး …ကျွန်တော့ တစ်သက် တော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသေးတာပါ…..ကျွန်တော့ အဖေဟာ လည်း သဘောင်္သားပဲမို့ သူ့ သူငယ်ချင်းပေါင်းများစွာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်…. ဒါပေမယ့် …. အဲဒိလိုကိုမတွေ့ဖူးတာ ပါ…. ဒါရိုက်တာ ကို လည်း မေးကြည့်ချင်ပါတယ်… အဲဒီလို သဘောင်္သားမျိုး များတွေ့ခဲ့ရင် ဂုတ်ကဆွဲပြီးခေါ်လာပြစေချင်ပါတယ်. ဗျာ …….
မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ မိဘသဘောတူရင် သဘောင်္သားဖြစ်ရင်ဖြစ် မဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ဖြစ် မဖြစ်ရင် နိုင်ငံခြားက စီးပွားရေးပညာရှင်ဖြစ်….. ဒီလိုလာပါတယ်…. ဒီအထဲမှာ ဆရာဝန်ကအသက်သာဆုံးပါပဲ … ဆရာဝန်ဆို လူရွှင်တော်မသုံးပါဘူး … ပေါချာချာ မလုပ်ပါဘူး ..နောက်ဆုံး ဆရာဝန်က မင်းသမီးကိုလက်လွှတ်အဆုံးရှုံးခံ …သဘောထားကြီးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်သူ ဇာတ်ရုပ်တွေသာများပါတယ်… အော်ကောင်းလေစွ….. နောက်တစ်မျိုးကတော့ … စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် နိုင်ငံခြားပြန်ပါ….. ဒါကတော့ တစ်ဝက်သက်သာ တစ်ဝက်မသက်သာပါပဲ…. သူ့နေရာကိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ.. ခပ်ချောချာ မင်းသားငယ်များက သရုပ်ဆောင်ပြီး တစ်ခါတစ်လေတော့….. လူရွှင်တော်တွေက ပေါချာချာ သရုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်…..အဆိုးဆုံး ကတော့ သဘောင်္သားပါပဲ….. သဘောင်္သားဆိုကြိုက်တဲ့ ကားသွားကြည့်လူကြမ်းဖြစ်ရင်ဖြစ် … မဖြစ်ရင်လူရွှင်တော်ဖြစ်….. သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပုံကလည်း ကြာကူလီဖြစ်ရင်ဖြစ်… တဏှာရူးဖြစ်ရင်ဖြစ်… မဖြစ်ရင် ငပေါဖြစ်….. ဒါမျိုးချည်းပါပဲ….
ဒီလို ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးက ခုမှတွေ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး … မြန်မာ ကားအတော်များများ မှာဗီလိန်ဆိုတာနဲ့ သဘောင်္သားဖြစ်….. မိဘက သဘောတူတဲ့ ငပေါဆိုတာနဲ့ သဘောင်္သားဖြစ်….. မင်းသားဆိုလို့ ရှားရှားပါးပါး .. တစ်ကားလားပဲတွေ့ဖူးပါတယ်… ဒါတောင်အဲဒီကားမှာ မင်းသားက လူရှုပ်လူပွေတဲ့ကဲကောင်းရော…. ကျွန်တော်မြန်မာကားအကြည့်နည်းနေလို့ များလား…. မဟုတ်ပါဘူး.. ကြည့်နေကျလူတွေသွားမေးလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့ ….ကျွန်တော်တို့ သဘောင်္သားများ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သောင်းချီရှိနေတာ … မင်းသားနေရာလေးများ မပေးနိုင်ကြဘူးလားလို့ တောင်တွေးမိပါတယ်….
ဒီတော့ သဘောသားဆိုတာ လူရှုပ်… လူပွေ… ခပ်ပေါပေါ .. ခပ်ချာချာ .. ကြောင်တောင်တောင်…. ဘိုလို မပီကလာ ပီကလာတွေလျှောက်မှုတ်နေတဲ့ လူလို့ … ရုပ်ရှင်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ … အသက်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်…. ဒီကြားထဲ … AIDS ကို သဘောင်္သားတွေ သယ်လာပါတယ်လို့ လည်း ပြောကြပြန်ပါတယ်…….ဒါဟာ ဟုတ်သလား မဟုတ်သလားတော့မသိပါဘူး .. အဲဒီလှိုင်းကတော့ အခုထိရိုက်ခတ်နေတုန်းပါပဲ….. တခါတလေ .. ဒီပေါ်မှာ ချာတိတ်မတွေ လာမိတ်ဆက်တဲ့ အခါ…. အစ်ကိုက ဘာလုပ်သလဲ ဆို… အစ်ကိုက သဘောင်္သားပါပေါ့ … ဟာ ဒါဆို လေးလုံး ရောဂါရောကင်းရဲ့လား ဆိုတာမျိုးတွေ ခုထိအမေးခံနေရတုန်းပါပဲ …… ရင်ထဲလည်း မကောင်းပါဘူး … ဒါတွေအားလုံးဟာ … အပြစ်တွေအားလုံး ရုပ်ရှင်ဆိုတာကြီးကို မဖို့ ချင်ပေမယ့် ဖို့လိုက်ရပါတော့မယ်…. ခေတ်အဆက်ဆက် သူတို့ ဒီလိုပဲ အသက်သွင်းရိုက်ခဲ့ကြသည်ကိုး…… သဘောင်္သားအကြောင်း ဘာတစ်လုံးမှ ဂဃနဏ မသိပဲ …. မင်းသားက သဘောင်္တက်သွား … သုံးနှစ်နေတော့ ကပ္ပတိန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြန်လာ .. အော်…
အဲဒီတော့ … ခေတ်အဆက်ဆက် … ဒီလို ရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ .. .အချို့ အချို့ သော ဥာဏ်ကြီးရှင် ဒါရိုက်တာကြီးများ ကို .. ကျွန်တော် သဘောင်္သား ငပေါလေး လင်းလွန်းညိုကနေ … အထွန့်ကလေးတက်ပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါ့မယ်….. အထွန့်တက်သမျှကိုလည်း ….နားလည်နိုင်အောင်လို့ တတ်နိုင်သမျှ သဘောင်္သားစကားလုံးတွေ ရှောင်ပြီး အပြင်လူအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပဲဖော်ပြပါရစေ….
ပေါချာချာ သဘောင်္သားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ……
ဟုတ်ကဲ့ ….. ပေါချာချာ သဘောင်္သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက်….. နံပါတ်တစ် … ပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝဖို့ လိုပါတယ်…. အခုမှ ဖွင့်တဲ့ BEST သင်တန်းတောင်မှ ပညာအရည်အချင်းကို …ဆယ်တန်းအောင်မှလက်ခံပါတယ်…. ရေကြောင်း တက္ကသိုလ်ကြီးကို တက်ဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ …. မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြင့်ဆုံးအမှတ်တွေကို ရဖို့ လိုပါမယ်….. ဆေးအမှတ်ကိုတောင်ကျော်နေပါတယ်….. ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ ရေကြောင်းသိပ္ပံ (ယခု ရေကြောင်းပညာကောလိပ်) ကို တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ …. ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်လို အမှတ်အများကြိးမမြင့်ပေမယ့်လည်း….. လူအကန့်အသတ်ရှိတာမို့ … လူတွေ့စာမေးပွဲကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြေဆိုကြရပြန်ပါတယ်…… ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်ကို လူ ရှစ်ရာကျော်ကနေ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်… လျှောက်ထားကြပြီး … လူသုံးရာသာလက်ခံပါတယ်…..
ကဲဒိလိုပညာရည်ပြည့်ဝနေရုံပဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး …. ကျန်းမာရေးမှာလည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည်ရပါသေးတယ်….. အထက်ပါ ကျောင်းနှစ်ကျောင်းလုံးကို စတက်တော့မယ်ဆိုကတည်းက …. ဆေးတွေစစ်ပါတယ်…. HIV… အသည်းရောင် အသားဝါဘီ…. စိတ်ကျန်းမာရေး… မျက်စိ… နား….. အကုန် အကုန် စစ်ဆေးပါတယ.် ရေကြောင်းပညာကောလိပ်မှာဆို ယောက်ကျား စစ်မစစ်ပါစစ်ဆေးပါသေးတယ်… သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက်…. အရပ်အမြင့် .. ကိုယ်အလေးချိန်ကို မှီရပါတယ်…. ….. ဒါတွေ အားလုံးအောင်ရပါတယ်…..
ဟုတ်ပါပြီ ဒါတွေ အောင်သွားပါပြီတဲ့ ..
သဘောင်္သားကြီးဖြစ်သွားပါလေရောလား ဆိုတော့ … မဟုတ်သေးပါဘူး …. ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ကြိးမှာ … ခက်ခဲလှတဲ့ ပထမနှစ်ကို အမှတ်များများ ရအောင် ကြိုးစားရပါသေးတယ်… ပထမနှစ်မှာ အမှတ်များ မှ…. NS (Nautical Science) နဲ့ ME (Marine Engineering) , EE (Electrical Engeering) အစရှိတဲ့ .. နိုင်ငံတကာသဘောင်္များပေါ်မှာ အမှုထမ်းနိုင်မယ့် လိုင်းကို ရပါတယ်…. မဟုတ်ရင်တော့ သဘောင်္သားဖြစ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့တော့ ….. ဒီလိုပဲရေကြောင်းသိပ္ပံမှာရော ဆိုတော့ …. တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်… စာမေးပွဲများရှိပြီး term သုံးခုလုံးကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွန်အောင်ပါမှ…သဘောင်္သားလမ်းကြောင်းကိုရပါမယ်…. ဒါတောင်ဒီကြားထဲမှာ … များပြားလှတဲ့ စည်းကမ်းတွေထဲက ဖောက်ဖျက်လို့ ….. ကျောင်းနားခံရတာတွေရှိပါသေးတယ်…… ဒီလိုနဲ့ ရေကြောင်း တက္ကသိုလ်ဆို .. ငါးနှစ်… ရေကြောင်းပညာကောလိပ်ဆို နှစ်နှစ်… တက်ပြီးရင်. .. အင်ဂျင်နီယာများ က သဘောင်္ကျင်းလုပ်သက်ယူပေးရပါသေးတယ်….ယခုတော့ ကျောင်း တက်နှစ်ထဲမှာ သက်သက်ညှာညှာ ထည့်ပေါင်းပေးတယ်လို့ ကြားပါတယ်….
ဒီလိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း …. စကာင်္ပူ (Poly Technic) နေပြီး လည်း သဘောင်္သားဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်…. ဒါလည်းလွယ်လှတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး … ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ သဘောင်္သားဖြစ်လာသူ .. မြန်မာပြည်မှာ အတော်ကလေးရှားပါသေးတယ်….
ကဲဒါဆို ဒီဟာတွေအားလုံးအောင်ပြီကွာ သဘောင်္သားဖြစ်ပြီလား ဆိုတော့…. မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျ…. မွန်းမံသင်တန်းပေါင်းများစွာ…… safety အတွက် သင်တန်းများ များစွာတက်ရပါတယ်….အဲဒီ ကနေ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးပါတယ်….. နိုင်ငံတကားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ရမှပဲ ….. နိုင်ငံတကာသဘောင်္များမှာ အလုပ်လုပ်လို့ ရပါမယ်…..
ထားပါလေ… ပြီးပါပြိပေါ့ … သဘောင်္သားဖြစ်ပြီလား .. မဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ……..သဘောင်္သားဆိုတာ သဘောင်္ပေါ်မရောက်မချင်း သဘောင်္သားမဖြစ်ပါဘူး …… သံပြားမနင်းဖူးမချင်းမဖြစ်ပါဘူး …. သဘောင်္လိုင်းတွေကို လိုက်ရှာရပါသေးတယ်….. ဒီနေရာမှာ ရိုက်ကြေးတွေ အများကြီးပေးရတာ …… ကိုယ့် မိသားစု လိုင်းမို့ အင်တာဗျူးနဲ့ ပါတာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်…… အသေးစိတ်အခက်အခဲတွေရေးရင် ရှည်နေဦးမှာမို့ … သိချင်ရင်… ဒေါပုံသဘောင်္သားရုံးကိုသာလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်……
ဒိလိုတွေ အဆင့်ဆင့်သွားပြီးသွားမှ….. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းမှာ အမှုထမ်းနိုင်မယ့် သဘောင်္သားများ စဖြစ်ပါတယ်….
အခုပြောပြတာက လမ်းကြောင်းနည်းနေပါသေးတယ်…. အခြားလမ်းကြောင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်.... အဲ… အဲဒါတွေကော လွယ်သလားမေး တစ်ခုမှ မလွယ်ပါဘူး … သိချင်ရင် ကိုယ့်အမျိုးတစ်ယောက်လောက် သဘောင်္တင်ကြည့်လိုက်ပါ သိသွားပါလိမ့်မယ်……
ဒီတော့ မေးစရာရှိပါတယ်… ဘာလို့ ဒီလောက်တောင်….. ပညာတွေ တတ်နေရတာလဲ … သဘောင်္သား အဲဒီလောက်ပညာတတ်ဖို့လိုသလား ဆိုတော့ …..လိုသပေါ့ဗျာလို့ ပဲဖြေရမှာပါပဲ
အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်စီးလာခဲ့တဲ့သဘောင်္က….. ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ တင်တဲ့ သဘောင်္ပါ….. အဲဒီသဘောင်္ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ သန်းလေးဆယ်ကျော်တန်ပါတယ်….. တန်ချိန်သုံးသောင်းကျော်ရှိပါတယ်….Tanker အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်…သဘောင်္ပေါ်မှာ tank ပေါင်း ၁၆ tank ပါဝင်ပါတယ်…. အဲဒီ သဘောင်္ပေါ်ကို တစ်ခါသားတော့ cargo တစ်မျိုးတင်လာပါတယ်… အဲဒိ ကုန် (cargo)ဟာ …. မော်တော်ကား ဘော်ဒီလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုမယ့် သံသား (Metal) ထဲမှာ ရောစပ်ရမယ့် chemical ဖြစ်ပါတယ်…. သူ့ tank တစ် tank တန်ဖိုးဟာ သဘောင်္တန်ဖိုးနဲ့ တူပါတယ်…. ဆယ့်ခြောက် tank ဆိုရင်တော့ တွက်သာကြည့်ပါတော့လေ….
ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ cargo တွေကို တင်ဆောင်နေတဲ့ သဘောင်္များကို မောင်းနှင်ဖို့ … ကုန်အတင်အချ လုပ်ဖို့ အတွက်….. ဘာပညာမှ မတတ်တဲ့လူတွေ လုပ်လို့ ရမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား ……ပေါချာချာ ရူးနှမ်းနှမ်းတွေလုပ်လို့ ရမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား ….ငါးပိရည် နဲ့ ချည်ရည်ဟင်းမှားသောက်တဲ့လူစားမျိုး လုပ်လို့ ရမယ့် အလုပ်မျိုးလို့ သင်ထင်ပါသလား…... ဒါဟာ တစ်ခုတည်းသော ဥပမာပါ… ထပ်ပေးရင် များကုန်ပါ့မယ်…
ပေါချာချာ ..သဘောင်္သားတွေ ဘယ်လို ရာထူးတိုးသလဲ …
အလွယ်တကူဖြေရရင်တော့ ….သဘောင်္သားတွေ….. ရာထူးတိုး အောင်စာမေးပွဲများစွာကိုခက်ခက်ခဲခဲ…. ရေးဖြေ.. ရော နှုတ်ဖြေပါ ဖြေကြရပါတယ်…. အချိန်နဲ့ ရာထူးတိုးတယ်ဆိုတာ သဘောင်္သား စစ်စစ်တွေ ရဲ့လောကမှာမရှိပါဘူး …. (သဘောင်္သား အစစ် များကိုသာ ရည်ညွှန်းပါသည်)
ကျွန်တော်က အင်ဂျင်နီယာမို့ …ကုန်းဘတ်ပိုင်း .. (DECK) က စာမေးပွဲသဘောတရားကိုနားမလည်ပါဘူး … ဒါပေမယ့် …. စာမေးပွဲလာဖြေတဲ့ second mate တွေကို သွားကြည့်ရင်…. ဇီးကွက်သာသာ မျက်နှာများ နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်….. စာကျက်ရလွန်းလို့ အိပ်ရေးပျက်….မျက်နှာချောင်ပြီး … ဇောချွေးခဏခဏပြန်တာ တွေ့ဖူးပါတယ်….လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မရပါဘူးလေ…..
Deck officer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ …. ပထမဦးဆုံး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်ပြည့်ရပါတယ်… လုပ်သက်ပြည့်မှ စာမေးပွဲဖြေခွင့်ရပါတယ်….. စာမေးပွဲမှာ ဘာသာပေါင်းများစွာပါရှိပြီး …. ရေးဖြေ နှင့် နှုတ်ဖြေ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားဖြေကြရပါတယ်…… နှစ်ခုလုံးအောင်မှ officer ဖြစ်ပါတယ်……ဒါလူအများ သိနေတဲ့ second mate စာမေးပွဲဆိုတာပါပဲ …. ပြီးရင်… chief officer စာမေးပွဲ …. Captain တန်း စာမေးပွဲဆိုပြီး ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်များ ယူကာ အဆင့်ဆင့် ဖြေဆိုကြရပါတယ်……
Engineer များမှာလည်း .. ပထမဆုံး ဆီလောင်း ဘ၀ကနေ… Engineer ဖြစ်လာဖို့ ….MOT second class part Aစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုကြရပါတယ်…. ဒီစာမေးပွဲကလည်း အတော်ခက်ပါတယ်… Applied Mechanic, Heat and Heat Engine, Maths, Marine Engineering Drawing, Ship construction and Naval Architacture . E – Tech..အစ ရှိတဲ့ ဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကို ဖြေဆိုကြရပါတယ်.. ဒါတွေကို အောင်မှပဲ… Junior Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါက … Junior တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ…. အရာရှိတန်းဝင်မယ့် Senior Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ …. Third Competency စာမေးပွဲကို စဖြေရပါတယ်…. ဒါကိုလည်း ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက်ရှိမှရမှာပါ…. အဲဒီကနေမှာ Chief Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အထိ…. Second class Part B., First Class Part A Part B အစရှိတာတွေကို ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် များ ယူပြီး အဆင့်ဆင့် ရေးဖြေရော.. နှုတ်ဖြေပါ….ဖြေဆိုကြရပါတယ်…..
အထက်ပါစာမေးပွဲများ အားလုံး အတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး … ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ ဖြစ်တဲ့ အတွက်…. Open book ဆန်ဆန်…. နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးက စာတွေအားလုံးကို လေ့လာကြရပါတယ်…. အကုန်သိမှ အကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ လက်ခံပါတယ်….
ဒီလိုစာမေးပွဲတွေဖြေပါမှ…. ရာထူးတက်ပါတယ်… ဒါတွေကို ပေါချာချာ .. ရူးနှမ်းနှမ်း…. ငါးပိရည်နှင့် ချည်ပေါင်ဟင်း မှားသောက်တဲ့ လူတွေဖြေလို့ ရမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား……အထက်က ပြောထားတာတွေ က အကျဉ်းချုံ့ထားရုံပဲရှိပါသေးတယ်…..
ဒါဆို သဘောင်္သားတွေ မပေါတာတော့ ဟုတ်ပြီ…. မင်းတို့ မိန်းမတော့ ပွေကို ပွေတယ်ကွာ ဟုတ်သလား …
ဒီမေးခွန်းအတွက် အလွယ်ဆုံးအဖြေကို ပေးပါမယ်…. သဘောင်္သားမှ မဟုတ်ပါဘူး မိန်းမပွေတတ်တဲ့လူက … သဘောင်္သားမဟုတ်လည်း …. ယောက်ကျားတောထဲသွားထားတောင်ရှာကြံပွေမှာပါပဲ …… သဘောင်္သားမှထူးပြီး ဒီကိစ္စမှာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး…. လွယ်လွယ်ကူကူဆိုရင်တော့ .. အနုပညာလောက ထဲက ဇာတ်ထုပ်တွေကို ခင်းချပစ်လိုက်ရင်… သဘောင်္သားတွေ …ပွေတယ်ဆိုတာ … သနားတယ်ဖြစ်သွားပါမယ်…..
ရှေးရှေးခေတ်ဟောင်း ဟိုး .. နိုင်တီးဂွမ်တီး က သဘောင်္သားကြီးတွေ ကိုတော့ … မသိပါဘူး …. ဘာလို့ ဆို သူတို့ လက်ထက်က .. ကျွန်တော်တို့ လောက် paper work တွေ.. inspection တွေ…. စက်ပစ္စည်းပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေ နည်းသေးတာကြောင့် …. ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
ဒီဘက်ခေတ်သဘောင်္သားတစ်ယောက်… ကမ်းကပ်လို့ မိန်းမပွေဖို့ ကို …. အချိန်ရမရ ကျွန်တော် အကြမ်းဖြင်းတွက်ပြပါမယ်….
ရေထဲနေတဲ့ အချိန်ကတော့ … ဘယ်မိန်းမမှ သဘောင်္ပေါ်ပါမလာတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး …. ဟုတ်ပါပြီ ကမ်းကပ်ပါပြီ……. ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကိုရောက်တာနဲ့ အဲဒီ ဆိပ်ကမ်းက ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်များ က တက်လာပြီး ပထမဆုံး .. သဘောင်္ကို စစ်တော့ တာပါပဲ…..သဘောင်္အခြေအနေ… အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်တွေ .. လုံခြုံရေး အစီအစဉ်တွေ….. စာရွက် စာတမ်းတွေ…. အကုန် အကုန်ကို စစ်တာပါပဲ…… ဒါတွေက Deck officer များနဲ့ Captain ကြီးများ ပိုသိပါလိမ့်မယ်…… တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ … ကုန်တင်ကုန်ချဖို့ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆိပ်ကမ်းက အလုပ်သမားများစွာက ကုန်ကို အမြန်ဆုံးချပြီး အမြန်ဆုံး ထွက်သွားနိုင်အောင် လုပ်တော့ တာပါပဲ… သဘောင်္ကလည်း အချိန်ပိုနေလို့ မရပါဘူး …. ဆိပ်ကမ်းကို company က နာရီနဲ့ ပိုက်ဆံပေးထားရတာပါ…..ဘယ် Company ကမှ ပိုက်ဆံကို အလကားနေရင်း အကုန်မခံပါဘူး …. ဒီကြားထဲမှာ .. နှစ်စဉ် စစ်ဆေးနေကျ .. inspection များ Audit များ ကလည်း လာပါသေးတယ်……. အဲဒိလို အချိန်ဆိုလို့ ကတော့ သဘောင်္တစ်ဆင်းလုံး ရူးမတတ်ပါပဲ….. ဒါတောင်ရိက္ခာလာပို့ တဲ့ ဟာမပါသေးပါဘူး …..
ကုန်ချတာကလည်း ယခုခေတ် စက်ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ကောင်းမွန်ချက်ကြောင့် မြန်မှ မြန်ပါပဲ …..တန်ထောင်ချီတင်လာတဲ့ Tank တစ် Tank ဆို နာရီပိုင်းပါပဲ…… ကျွန်တော့ … တစ်သက်တော့ သဘောင်္တစ်ဆင်း ကမ်းမှာ အကြာဆုံးနေတာ အလွန့်အလွန်ဆုံး နှစ်ရက်ပါပဲ… ဒါ ရှာမှ ရှားပါ….
ကျွန်တော်တို့ လို အင်ဂျင်နီယာများ အနေနဲ့ ကလည်း …. လနဲ့ ချီ ပြီးမောင်းလာတဲ့ စက်ပစ္စည်း .. အင်ဂျင်များကို …. ကြံခိုင်အောင် ရပ်ထားတဲ့ အချိန်လေးမှာ အချိန်လုပြီးလုပ်ကြရပါတယ်…. ပြင်စရာရှိတာကိုလည်း ပြင်ကြရပါတယ်…. စက်ပစ္စည်းများ က သက်တမ်း (Running Hour) နဲ့ ချိန်ပြီး … အဟောင်းဖြုတ်အသစ်လဲ … သန့်ရှင်းရေး….. စတာတွေလုပ်ရတာကြောင့် …သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ ရောက်တဲ့ port မှာ ဖြုတ်လဲတပ်ဆင်ကြရပါတယ်…. လုပ်ပြီးရင်လည်း လုပ်သမျှ ဖြုတ်သမျှကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရုံးကို ပို့ ပေးရပါတယ်… လိမ်လို့ မရပါဘူး….. အဲ စက်ပစ္စည်းများ က သေးသေးကွေးကွေးလား ဆိုတော့ …. ကျွန်တော်တို့ ဖြုတ်ရတဲ့ တစ်ချို့ ဂွ ဆိုက် (အရွယ်အစား) များ ဟာ ၄၈ ၅၀ အထိရှိပါတယ်…. အင်ဂျင်ကိုင်ဖူးသူများ မှန်းတတ်ပါလိမ့်မယ်…. မမှန်းတတ်သူများ အတွက်ကတော့ … ဖြုတ်ထားသမျှ ပစ္စည်းများ အားလုံး လက်နဲ့ မနိုင်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး ..ကရိန်းများ နဲ့ သာမရပါတယ်… ဒီလောက်ဆို အင်ဂျင် များ ဘယ်လောက်ကြီးမယ်ဆိုတာမှန်းလို့ ရပါလိမ့်မယ်…..
အချိန်များ တွက်ပါပြီ….. ပျမ်းမျှ တစ်ရက် အချိန့်ရတဲ့ ဆိပ်ကမ်းများ ဆိုပါစို့
Deck officer များ ကတော့ … အောက်ကို ဆင်းဖို့ လုံးဝမစဉ်းစားပါနဲ့ Cargo Duty ရှိလို့ ပါ…အထက်မှာပြောခဲ့သလို ကုန်ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာသန်းချီတန်တာကြောင့် … ဘာတစ်ခုမှ အမှားအယွင်းအတိမ်းအစောင်းမခံပါဘူး…… ကုန်ချနေတဲ့ တစ်လျှောက်လုံး အလှည့်နဲ့ စောင့်ရပါတယ်….. ကိုယ်နားပြီဆိုရင်လည်း အောက်မဆင်းအားပါဘူး …. နောက်တစ်ချိန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အားမွေးပြီးအိပ်ရတယ်…. ထမင်းကို ကသုတ်ကရက်စားကြရပါတယ်…. အထက်က ပြောခဲ့သလို inspectionများရှိလို့ ကတော့ .. တစ်ချို့ဆို ထမင်းပါငတ်ပါတယ်….. ဒီတော့ Deck officer များကတော့ အောက်ကို မဆင်းဖြစ်ကြပါဘူး …
ကဲ အင်ဂျင်နီယာများ ကရော…. ကျွန်တော်တို့ မိန်းအင်ဂျင်ကို တစ်ခါကိုင်ရင်…. အနည်းဆုံး ခြောက်နာရီကနေ ရှစ်နာရီဝန်းကျင်ကြာပါတယ်.. ဒါဟာ အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ပြီးတာပေါ့လေ….. အဲဒီထဲမှာ မှ ခက်ခက်ခဲခဲလေးတွေ တွေ့ပြီဆိုလို့ ကတော့ ….. အိပ်ပါမအိပ်ရတော့ပါဘူး …… inspection များ ရှိလို့ ကတော့ … သူတို့ မစစ်ပြီးမချင်း ဘာ ဖြုတ်တပ်မှ လုပ်လို့ မရပါဘူး … အင်ဂျင်ခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို တောက်ပြောင်နေအောင်ထားရတာပါ…. စစ်ဆေးရေးပြီးမှ…. အချိန်ကို မှန်းပြီး တက်သုတ်ရိုက်လုပ်ကြရတာပါ….
ကဲမိတ်ဆွေ …. ဘယ်မှာလဲ ကမ်းဆင်းချိန်…. ဘယ်မှာလဲနိုက်ကလပ်…..
အဲ.. အားတဲ့ပို့(PORT) ဆိပ်ကမ်းတွေမရှိဘူးလား ဆိုတော့ ရှိပါတယ်….
ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက် ဆယ့်သုံးလ သဘောင်္စီးလာတာမှာ … လုံးဝ အားပြီး ကမ်းကို ဆင်းရတာ .. နှစ်ခါပါ…… တစ်နှစ်မှာ နှစ်ခါပါပဲ …. တစ်ခါဆင်း တော့ သုံးနာရီထက်ပိုမနေရပါဘူး …….
သဘောင်္သားတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်ချိန်က ဆယ်နာရီပါ….. အိပ်ချိန် ရှစ်နာရီပေါင်းပါ…. ဆယ့်ရှစ်နာရီပေါ့… အဲဒါကို နှစ်ဆယ့်လေးနာရီထဲက နှုတ်ပစ်လိုက်ပါ… ခြောက်နာရီကျန်ပါမယ်…
အဲဒီခြောက်နာရီမှာ .. ကျွန်တော်တို့ ရေချိုး အ၀တ်လျှော် ထမင်းစား …. နဲ့ ကမ်းနားရောက်ရင်… သဘောင်္ပေါ်လာပြီးရောင်းတဲ့ တယ်လီဖုန်းကတ်လေးများနဲ့ … အိမ်က အိမ်သူများ ဆီ…. လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ဖုန်းဆက်ကြရတာပါပဲ….. သဘောင်္ပေါ်က ဖုန်းထက် ဒီဖုန်းတွေက သက်သာတာကိုး….. ဖုန်းက တစ်ခါပြော တစ်နာရီနဲ့ သာတွက်…. အိုး သဘောင်္သား အိမ်လွမ်းသမား ဖိုးပြောချင်များ အတွက်ကတော့ … ကျန်နေတဲ့ခြောက်နာရီတောင်မလောက်လို့ ထမင်းစားရင်းတောင်ဖုန်းပြောကြရတာပါ……
ဒီတော့ တွက်ကြည့်လိုက်ပါ… ဘယ်မှာလဲ မိန်းမပွေချိန်…….
ဒါကတော့ မင်းသက်သက် ကပ်သပ်ပြောတာပါကွာ…. မင်းတို့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ အများ ကြီးငါတွေ့ဖူးပါတယ်ဆိုလည်း …. တစ်နှစ်လုံးမှာမှ. …ကမ်းကို သုံးလေးခေါက်ဆင်းပြီး အပျော်ဓာတ်ပုံလေး ရိုက်ခွင့်ရတာကိုတော့ အပြစ်မတင်တန်ကောင်းပါဘူးလို့ ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်…..
ကဲဒါဆို မင်းတို့ ကမ်းနားဆင်းတဲ့ အချိန်ကတော့ ရှိကို ရှိမှာပဲ .....လို့ မေးလာရင်တော့ …
Posted in: advice,knowledge,literature